Dhagayso: Xarakada Al-Shabab iyo Jamaacaad kale oo Jihaadi ah oo ka hadlay arinta QUDUS. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhagayso: Xarakada Al-Shabab iyo Jamaacaad kale oo Jihaadi ah oo ka hadlay arinta QUDUS.
On Dec 7, 2017 219 0
Iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu shaaciyay inuu u aqoonsaday magaalada Al-Qudus caasimadda maamulka Yahuudda, dhawaana safaaradda Maraykanka laga soo rari doono magaalalda Talla’biib oo la keeni doono Al-Qudus, ayaa dadka arintaas ka hadlya waxaa ku jira qaar kamid ah jamaacaatka jihaadiga ah.
Bayaan kasoo baxay Mujaahidiinta AlQaacida ee Jaziiradda Carabta ayaa loo hadlay go’aanka cusub ee uu qaatay Trump, iyagoona Mujaahidiinta baaqyo muhiim ah u jeediyay guud ahaan muslimiinta caalamka.
“ Yahuudu majirto wax xuquuq ah oo ay ku leeyihiin ciida Filastiin, qadiyadda halkii loo dheelmiyay nabigeena SCW-na ma ahan milkiyad uu leeyahay Donalad Trump si uu usiiyo Yahuudda, kamana tagi doonaan Al-Qudus wiilasha Al-Faatix Cumar Al-Faaruuq Radiyallaahu canhu iyo Salaaxu-diin Al-Ayuubi, mardhowna Inshaa’Allaah waxay soo ceshan doonaan Qudus iyadoo sharfoon” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay Alqaacidada Jaziiradda Carabta.
Wuxuu bayaanku baaq u diray guud ahaan Muslimiinta gaar ahaan Mujaahidiinta, iyadoona Mujaahidiinta Alqaacida ee Maqribul Islaam ay ku baaqeen in loo istaago difaaca qadiyadda Al-Aqsaa iyo guud ahaan dhulka Filastiin.
“ waxaan ugu baaqeynaa kuwa u shaqeeya Islaamka gaar ahaan Mujaahidiinta, iney furqada iyo khilaafka iska fogeeyaan, ayna dusha saartaan amaanada u hiilinta muslimiinta mustadcafiinta muslimiinta, waana in wado kasta loo maraa sidii looga khafiifin lahaa muslimiinta Filastiin dhibaatada heysta”
“ waxaan sidoo kale Muslimiinta meel kasto ay joogaan ku leenahay, tani waa Al-Qudus oo iibsaneyso Maraykanka, iyadoo xukaamta mandiqadda ay heshiisyo la gaarayaan Yahuudda, ee aaway kaalintiina? Aaweyna waajibkiina sharci ee ah inaad ku taageertaan muslimiintaas hubka, hantida, iyo Mujaahidiinta, haddii aydaan dhaqaaqin Alle ma qadaree, beri waxaa la gadan doonaa booska ugu dahirsan oo ah Makka Al-Mukrama, markaasna ma jiri doonto cid difaacda”. Ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay Alqaacidada Jaziiradda Carabta.
Imaarda Islaamiga ee Afqaanistaan ayaa kamid ah dadka sida deg dega ah uga hadlay go’aanka madaxweynaha cunsuriga ah ee Donald Trump.
Bayaan kasoo baxay Imaarada oo lagu baahiyay baraha Internetka, waxay ku sheegtay iney kasoo horjeedo arintan, iyadoona ku eedeysay Maraykanka inuu had iyo goor u sacyinayo dhibaateynta muslimiinta iyo waxyeeleyntooda.
Imaaradu waxay baaq u dirtay guud ahaan Muslimiinta caalamka, iyadoona ugu baaqday iney kacaan, kana hor yimaadaan go’aanka Donald Trump, iyadona dhanka kale ka codstay Muslimiinta in wax weliba oo la awoodo lagu taageero musliminta Filastiin.
Xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ayaa kamid ah jamaacaadka jihaadiga ah ee durba ka hadlay arinakn, war qoraal ah oo uu ku saxiiixnaa Sheykh Cali Maxamuud Raage Sheykh Cali dheere Afhayeenka mujaahidiinta ayuu ku sheegay in go’aanka uu qaatay Trump uu cadeyn u yahay sida cadaawada Maraykanka ee ka dhanka ah muslimiinta usii korortay, wuxuuna sheegay in go;aankan uusan waaqica waxba ka bedeli doonin.
Sheekha ayaa ugu baaqay guud ahaan musliminta caalamka iney hubka qaataan, islamarkaana difaacaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsaa oo ku yaala magaalada Al-Qudus.
Shakhsiyaad muuq muuqda oo ay ku jiraan culimada diinta Islaamka, Aqoonyahano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee caalamka ayaa dhankooda ka hadlay arintan, iyagoona si isku mid ah uga soo horjeestay tallaabada Donald Trump ugu aqoonsadya Al-Qudus caasimad ay leeyihiin Yahuuda.
Halkan ka dhagayso Warbixin Al-Shabaab iyo Jaamacaad kale oo ka hadlay Qudus